FANANAN-TANY AO MORAMANGA : “Ara-dalàna ny maha tompon’ny tany ny Féculerie de Marovitsika”
Tsy mety mifarana ny raharaha ady tany ao Marovitsika Kaominina Belavabary distrikan’i Moramanga. 5 novembre 2018
Toerana izay misy ny orinasa Féculerie de Marovitsika. Orinasa niorina tamin’ny taona 1902 manodina vokatra mangahazo ary mamelona fianakaviana maro. Miisa 70 ny mpiasa raikitra raha manodidina ny 150, kosa ireo mpiasa an-tselika. Orinasa miorina amin’ny velaran-tany 5 300 ha. Mandray anjara feno amin’ ny sosialim-bahoaka. Ny taona 2013, dia nitsahatra namokatra fanodinana mangahazo ny orinasa fa niova ho mpamboly hazo sy mpamokatra manitra. Misy olom-bitsy efa misotro ronono ary efa nomen’ilay orinasa zo feno anefa no mitady fomba re hetra hibodoana ny tanin’ny orinasa.
Misy mpanao politika manao fitaovana politika. Andro vitsy lasa, dia tonga tany an-toerana i Paolo izay tale fampielazan-kevitra an’ny kandidà iray. Nandrebireby sain’olona tao Marovitsika fa tsy maintsy ho azon’izy ireo ny tany. Nilaza moa ity talen’ ny fampielezan-kevtra ity tao anatin’ilay horonantsary navoakany momba io Marovitsika io fa “ tsy voatery hanara-dalàna ny vahoaka”.
Ny zoma 2 novambra lasa teo, nampiantso mpanao gazety tao Toamasina ny mpisolovava ny orinasa Féculerie de Marovitsika, Me Razakasolo Fara. Fihaonana tamin’ny mpanao gazety nampisehoany ireo porofo rehetra ny maha an’ny Féculerie ny tany sy nitondrany fanazavana. Nambarany fa olona tsy mahalala ny tantara momba io tany io akory i Paolo sy Mahery Lanto Manandafy. Nomarihiny fa andian’olom-bitsy mpiasa tao taloha efa misotro ronono ary efa nomen’ny orinasa zo feno ireo mitady hibodo tsotra izao ny tanin’ny orinasa io.
Ara-dalàna ny maha tompon’ny tany ny orinasa Féculerie. Didy maro no mana marina izany. Aoka tsy hatao fitaovana politika ny tanin’ny orinasa, hoy hatrany i Me Fara. Mahagaga hatrany, hoy ity mpisolovava ity fa miezaka miantso mpampiasa vola ho tonga eto Madagasilara mba hanangana orinasa isika Malagasy nefa ny orinasa efa niorina efa ela teto sady manome asa indray no tadiavina potehina.
Fanapotehana orinasa sy fanapotehana ny tontolo iainana ao Marovitsika ny fanapotehana ny orinasa Féculerie de Marovitsika, hoy Me Fara. Nanaitra an’ity mpisolovava ity koa ilay didy navoakan’ny Fitsarana tao Moramanga ny alarobia 31 oktobra lasa teo, izay nanome rariny olona iray nibodo tanin’ ny orinasa sy nanangana trano tsy nahazoana alalana eo amin’ny tanin’ny orinasa. Miantso izay Filoham-pirenena ho lany eo ny tenany mba hijery akaiky ny orinasa Féculerie. Sakana lava amin’ny fandraharahana eto amintsika ny fampidirana lava ny resaka politika ataon’ny mpanao politika.
Tratran’ny mpifaninana taminy nangala-bato i Nepatraiky Rakotomamonjy KANDIDA DEPIOTE IHOSY (229) 12 juin 2019 Nodimandry teo amin’ny faha-63 taonany i Jean Robert VERY OLOMANGA ANTSIRANANA (229) 12 juin 2019 Miaramila miisa 34 naiditra am-ponja vonjimaika HETSIKA FAMPANDRIANA FAHALEMANA (200) 12 juin 2019 Saron’ny zandary tao an-tranony ireo poketran’olona voaendaka JIOLAHY RAINDAHINY TRATRA TENY ITAOSY (170) 11 juin 2019 Mandà ny endrika tsindry rehetra atao aminy ny Hcc VOKA-PIFIDIANANA OFISIALY (161) 11 juin 2019 Naiditra am-ponja vonjimaika eny Antanimora LEHILAHY TRATRA NANGARONA NY PAOSIN’ NY NAMANY (152) 13 juin 2019